Garaad Cabdullaahi Cali Ciid: “baaq nabadeed macno weyn ma leh … mar haddii aan baaqa lagu sheegin in Muuse uu ciidankiisa kala baxo gobolka Sool” (dhegayso) – Radio Daljir
Maajo 27, 2018 4:49 g 0
Garaad Cabdullaahi Cali Ciid oo ah Afayeenka Isimada Puntland ayaa waxa uu madaxda Puntland ugu saraysa ugu baaqay in ay gutaan masuuliyada dastuuriga ah ee ka saaran soocelitanta gobolada maqan ee Puntland. Garaadka waxa uu yiri, “waxba soo kordhin mayaan warsaxaafadeed la soo saaro markasta.”
Garaadka ayaa waxa uu ka hadlay baaqyada laga soo saaro dagaalka Tukaraq, waxa uuna yiri, “baaq nabadeed macno weyn ma leh, ha ka yimaado shakhsi Soomaaliyeed ama beel caalam, mar haddii aan baaqa lagu sheegin in Muuse uu ciidankiisa kala baxo gobolka Sool.”
Wariye Xan Heykal ayuu Garaadku u waramay.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17286